पेटीकोट लगाएर प्रदर्शनमा उत्रिएकी सावीत्री सुवेदी आजभोली के गर्दैछिन् ? (भिडियो सहित) - Namaste Times
सोमबार, आषाढ ०२, २०७६ | Saturday, September 15, 2018
पेटीकोट लगाएर प्रदर्शनमा उत्रिएकी सावीत्री सुवेदी आजभोली के गर्दैछिन् ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ३०, २०७५ समय: ९:३६:५९
काठमाडौं – सावीत्री सुवेदी बाराको सामान्य परिवारमा जन्मिएकी व्यक्ति हुन् । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकी सुवेदी केही दिन अगाडी माइतीघर मण्डलामा बलत्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै पेटिकोट लगाएर आन्दोलन गरे यता निरन्तर चर्चामा छिन् ।
सानैदेखि ब्वाइज कट केशविन्यासमा केटाजस्तै ठाँटिएर हिँड्ने सावीत्रीलाई पहिल्यैदेखि महिला र पुरुषमा केही फरक छैन भन्ने लाग्थ्यो । अहिले उनी बलत्कारविरुद्धको अभियानलाई सिर्जनशील र रचनात्मक रूपमा अघि बढाउन लागिपरेकी बताउँछिन् ।
म पनि मृत्युदण्डको विरोधी हुँ । मान्छेले जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ, उसको त्यो अधिकार हनन गर्नु हुँदैन, तर हाम्रो समाजमा एउटी नानी बलत्कृत भएर मरी, निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधी बनाएर खडा गरिदिने, खुल्ला सिमानाका कारण अपराधी भाग्ने, त्यसकारण हामीले बलत्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेका हौं । एकोहोरो लागिरहँदा बलात्कारीलाई सरकारले सर्वस्वसहित जन्मकैदसम्मको त व्यवस्था गर्छ कि भनेर हामीले बलत्कारीलाई फाँसीको माग गरेका हौं ।
आगामी आन्दोलनका स्वरुपहरु कस्ता हुनेछन् ? के बलत्कारीलाई फासीको सजाय हुन्छ त ? यी यस्तै विषयमा गरिएको कुराकानी सावीत्री सुवेदी संग भागीरथ पोखरेलको साथमा……………………
भिडियो हेर्नुहोस् ……………………